Mozambika: Mostra fahatelo amin’ny sarimihetsika Afrikana, nasongadina ny sarimihetsika Angoley · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Desambra 2019 4:02 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Português
Natao ny 13 Aprily ka hatramin'ny 10 May 2015 tany Mozambika tao an-tanàdehiben'i Maputo, Inhambane ary Nampula ny andiany fahatelo amin'ny Herinandron'ny Sarimihetsika Afrikanina. Nampiasaina tao amin'ny tambajotra sosialy ireto tenirohy manaraka ireto: ‪#‎CCBM, #Mozambique , #‎Moçambique.
Ho an'ity andiany fahatelo ity dia nomem-boninahitra niaraka tamin'ny O Grande Kilapy i Angola, sarimihetsika fanokafana ny fetibe izay notontosain'ilay Angoley Zezé Gamboa:
Teny avy amin'ny fiteny Kimbundu any Angola ny hoe #‎KILAPY izay midika hoe: mamely, mikonokonona, mivazivazy na mindrana nefa tsy mamerina…
Nisolo tena an'i Brezila nandritra ity Mostra ity ihany koa ilay mpilalao sarimihetsika Lázaro Ramos miantsehatra ao amin'ny horonantsary fanokafana.
Nizara fotoana nahafinaritra ho an'ny kolontsaina iraisana i Mozambika sy Brezila. Fankasitrahana ho an'ity firenena ity nandritra ny Karnavalin'i Brezila, nahitana ny fanatrehan'ireo mpanakanto Mozambikana nandritra ny hetsika ara-kolontsaina tany Brezila, ohatra i Regina Casé, mpilalao sarimihetsika sady mpanolotra fandaharana malaza amin'ny fahitalavitra any Brezila.